‘मोटिभेसन स्टेसन’ बनाऔँ ! – HamroKatha
‘मोटिभेसन स्टेसन’ बनाऔँ !
एउटा सरल अभ्यास गरौँ !
हाम्रो कथा २०७५ चैत २५ गते १७:०२
जब जिन्दगीको पेट्रोल कम हुँदै जान थाल्छ, जीवनको ईञ्जन सुस्त हुन थाल्छ, टक्क मोटिभेसन स्टेसनमा जाऔँ अनि आफूलाई फेरी मोटिभेट ‘उत्प्रेरित’ गरी हालौँ ।
एक सरल अभ्यास गरौँ !
आफ्नो ल्यापटप र फोनमा ‘मोटिभेसन स्टेसन’ भन्ने फोल्डर बनाएर राखौँ । यस फोल्डरमा यस्ता फिल्म राखौँ जसले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ । यस्ता भिडियोहरू राखौँ जसले हामीलाई पुर्न जगरीत गर्छ । यस्ता प्रेरक भनाइहरू राखौँ जसले बढ्न साहस प्रदान गरोस् । यस्ता लेख, रचनाहरू राखौँ जसले हाम्रो दृष्टिकोण तुरुन्तै बदल्दिने शक्ति राख्छ I त्यस्तै प्रेरणादायी तस्बिर र गीतहरू भेट्यो कि यस फोल्डरमा राखी हालौँ । आफ्नो ‘मोटिभेसन स्टेसन’ विस्तार गर्दै जाऔँ ।
यस्तो किन गर्नु पर्ने ?
किनकि एक्कासि दिक्क लाग्दा, तनावको स्थितिमा हुँदा; इन्टरनेटमा यी भिडियो, तस्बिर, लेखहरू खोज्ने ऊर्जा हामीमा हुँदैन। त्यति बेला मात्र समस्यामा डुब्न मन लाग्छ, रिसाउन मन लाग्छ । निराश भई घण्टौ समय बर्बाद गर्न मन लाग्छ। सायद रुन पनि मन लाग्छ ।
तनावको स्थितिमा दिमाग राम्रो नचल्ने भएकाले पूर्व तयारी गरी राख्नु पर्छ । आफ्नो ‘मोटिभेसन स्टेसन’ बनाई राखौँ I आफुलाई खुशी राख्ने जिम्मवारी हामीले अरु कसैलाई दिन सक्दैनौं । यो जिम्मेवारी त स्वयम् आफ्नै हो ।